Nhau dzeZimbabwe, 01 Ndira 2019
Chipiri 1 Ndira 2019
Ndira 01, 2019
Zvinhu Zvoramba Zvichidhura Kunyangwe Hurumende Yakabvumidza Kutengwa kweZvimwe kuSouth Africa neDzimwe Nyika
Vanhu vave kubvumidzwa kutenga zvinhu kunze asi zvinhu zvoramba zvakaomera vakawanda.
Vagere kuMaruwa Vochema Vachiti Hupenyu Hucharamba Huchivaomera
Vagari vekumaruwa ekuZimunya mudunhu reManicaland vanoti havaoni chiedza mugore idzva ra2019, sezvo zvinhu zvanga zvisina kuvamirira zvakanaka mugore ra 2018.
Vakawanda Vanoti Havana Tarisiro Yakanaka Mugore Rino ra2019
Vemabhizinisi nevanhuwo zvavo vanoti gore rino rinoda kuti vanhu vasunge dzisimbe sezvo pasina tarisiro yekunaka kwezvinhu munyika.
Vana Chiremba Vanoti Havasi Kuzodzokera Kubasa Kudzamara Hurumende Yabvumirana Navo
Sangano rinomiririra vana chiremba vanoshanda muzvipatara zvehurumende, reZimbabwe Hospital Doctors Association, ZHDA, rinoti nhengo dzaro hadzisi kuzodzokera kubasa kusvika hurumende yatenderana naro pazvinhu zvavanoda kuona zvichiitwa kwavari nemuzvipatara.
Gore ra2018 Rakave Gore Raive Nezvose, Kufara neKusuwa
Muna Gunyana mhuri yemitambo muZimbabwe yakapemberera apo Muzvare Kirsty Coventry vakagadzwa segurukota rezvemitambo.
Zvizvarwa ZveZimbabwe Zviri muAmerica Zvopinda muGoredzva Zvichiita Zvakasiyanasiyana.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muAmerica zviri kumirira kupinda mugoredzva zvichiita zvakasiyana siyana. Vamwe vanoti vachange vari kumakereke, vamwewo vari pamabasa, ukuwo vamwe vachiti vari kupinda nemabiko ekunwa nekufara nehama neshamwari vachipemberera.
Zvita 31, 2018
Vanhu Vokurudzirwa Kudya ZveChinyakare Kudzivirira Kubatwa neGomarara
Vanhu vakawa munyika vari kurasikirwa nehupenyu nekuda kwezvirwere zvakaita sechegomarara, asi vamwe vanamazvikokota munyaya dzezvehutano vanoti huwandu hwevari kufa nechirwere ichi hunogona kudereredzwa nekudya cikafu chine hutano zvikuru chechinyakare.
VaMnangagwa Vokurudzira Kubatana Muna 2019
Mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa nemusi weMuvhuro vakapa mashoko avo ekupera kwegore vachiti vane chivimbo chekuti gore ra2019 richange rakanakira veruzhinji zvikuru munyaya dzezvehupfumi.
Vanotengesa Mumigwagwa Vorwisana neMapurisa neMauto
MuHarare nemamwe maguta mange muine kurwisana pakati pevanotengesa mumigwagwa nemapurisa dzimwe nguva mauto ebazi reMilitary Police.
Nhengo DzeARTUZ Dzinoti Dzicharega Mabasa Musi Wa 7 Ndira
Sangano rinomiririra vadzidzisi vekumaruwa, reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, kana kuti ARTUZ, ranyora tsamba kuhurumende richiizivisa kuti nhengo dzaro dzicharega mabasa kwenguva isingazikanwi kutanga musi wa 7 Ndira, kusvika hurumende yagadzirisa zvese zvirikunetsa vadzidzisi.
FC Platinum Yokurudzirwa Kukunda Mitambo yepaMusha Kuti Ibudirire muMakwikwi eCaf Champions League
Chikwata cheFC Platinum chirikuvhura makundano enhabvu egore rino asi paine mibvunzo.
Vanachiremba Vari Pakuramwa Mabasa Vanoramba Kudzokera kuMabasa
Vanachiremba vadiki vari pakuramwa mabasa vari pasi pesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association vanoti havasi kuzotambira kurudziro yehurumende yekuti vamire kuramwa mabasa vadzokere kumabasa zvichemo zvavo zvichigadziriswa.